Dib u Jaleec Sooyaalka Taariikhdeenna!! | Awdal State News Network
Home » ANALYSIS & EVENTS » Dib u Jaleec Sooyaalka Taariikhdeenna!!
Haadaamo-Boramacity.com-Saraakiishii Soomaaliyeed, xilli hore ayay bilaabeen in ay la xiriiraan saraakiisha Itoobiyaanka ah ee la wareegey taladii dalkooda. Labadii hoggaamiye ee ugu horeeyey (Jeneraal Andom iyo Jeneraal Baanti) ayay hor-dhigeen codsi ah in ay madax-bannaani siiyaan gobolka ay Soomaalida ka heystaan. Itoobiyaanku waa ay ku adkaatey in ay bixiyaan dhul baaxaddiisu ay ku dhowdahay kala-bar (46 %) dhulka ay ka taliyaan. Waxaa kale oo u muuqatey in dalku uu sida kuulo firdhadey u kala fur-furanayo haddii ay qeyb ka bixiyaan. Read More>>>
Bulshooyinka ay madaxdoodu ka caajisaan fulinta waajibaadka qowmiyadeed, waxay ku danbeeyaan in ay iyagu is-cunaan. Waxay yeeshaan weji lamid ah kii ay Itoobiya lahayd xilligaas fool-xumida huwiyey taariikhdii dalkooda.
Taasi waxay salka ku heysaa ballan-qaadyada beenta ah oo madaxdu ay ummaddooda kaga maaweeliyaan ururinta iyo hagaajinta nolosha. Dabadeeddad-weynuhu waxay ku hoobtaan marxalad fowda ah oo aayahooda khatar gelisa. Aqoonyahannada bulsho-baradka ah kuwooda u kuur-gala wacaallada nolosha, waxay xaaladdaas ku magacaabaan a-politic (howtal-hamag). Markaas baa waxaa furmaya dhamaan mus-ciliilihii ay bulshadu dugsaneysey.
Is-cunkii saraakiishii Itoobiya, waxay himilo madax-bannaani ku abuurtey ummadihii ay xooga ku heysteen oo ay Soomaalidu kamidka ahaayeen. GS ee K Soomaaliyeed, waxaa soo fuuley culeys kaga imanayey odeyaashii iyo dhallinyaradii ku noolaa Xamar ee u dhashey beelaha ku dhaqan gobolada somaaligalbeed. Dadkaasi waxay dalbayeen in dowladdu ay ku taageedho abaabul lagu diyaarinayo gulufyo colaadeed oo gobolka looga kiciyo maamullada ku xiran Addis-ababa.
Saraakiishii Soomaaliyeed, xilli hore ayay bilaabeen in ay la xiriiraan saraakiisha Itoobiyaanka ah ee la wareegey taladii dalkooda. Labadii hoggaamiye ee ugu horeeyey (Jeneraal Andom iyo Jeneraal Baanti) ayay hor-dhigeen codsi ah in ay madax-bannaani siiyaan gobolka ay Soomaalida ka heystaan. Itoobiyaanku waa ay ku adkaatey in ay bixiyaan dhul baaxaddiisu ay ku dhowdahay kala-bar (46 %) dhulka ay ka taliyaan. Waxaa kale oo u muuqatey in dalku uu sida kuulo firdhadey u kala fur-furanayo haddii ay qeyb ka bixiyaan. Sidaa darteed diidmo qayaxan ayay kaga jawaabeen codsigii Soomaalida. Waxaa xusid mudan, sarkaalka saddexaad oo talada Itoobiya boobey, Col. Mengistu Xeyle Mariam, in uu la soo xiriirey saraakiisha ka talisey Soomaaliya. Wuxuu ka codsadey in ay Itoobiya ku taageeraan ciidamo Soomaaliyeed oo tiradoodu dhantahay 10.000 nin iyo qalabkoodii.
Mengistu danta uu lahaa waxay ahayd in ciidankaas uu ku muquuniyo dabka cagaha ka gubey maamulkiisa, kaas oo ka hurayey gobolka Ereteriya. Hoggaamiyaha Itoobiya ayaa xilligaas ku baryootamey in uu yahay nin mabaadiida Maarkisiyaddu ay dhab ka tahay, sidaa darteed uu Soomaalida ka mudan yahay in ay taageero u fidiyaan. Saraakiisha Soomaaliyeed, oo xilligaas ahaa kuwo aanan u xaad-qaboobeyn Itoobiya, waxay ku guda jireen taakuleynta howlgalladii ciidameed ee jabhaddii xoreynta Soomaali Galbeed oo markaas dhowr bilood ka socdey gudaha Itoobiya. (Wargeyska Al-Ahraam. 27/ 5- 1977).
GS ee K, bartamihii 1975-kii, ayay ishaaradii ugu horeysey siiyeyeen dadkii soomaaligalbeed. Waxay u oggolaadeen in ay si madax-bannaan qadiyaddooda uga jeedsadaan golayaasha dadku isugu yimaadaan, gaar ahaan xarumihii xaafadaha iyo degmooyinka ee la oran jirey Golayaasha Hanuuninta. Waxaa Xamar ka bilowmey fadhiyo ay isku arkaan dhallinyaro gobolka u dhashey oo wax ka baranayey dugsiyadii Xamar. Fadhiyadaas, waa ay ku kala war qaadan jireen, islamarkaa waxay isku dhaafsan jireen aragtiyaalka ay doonayeen in ay dalka ku xoreeyaan. Waxay sameysteen guddi dhallinyaro, iyaga oo markiiba bilaabey in ay dhaqaale iska ururiyaan. Isla markaas waxay diiwaan galiyeen magacyada iyo cinwaanada dhamaan dadkoodii ku sugnaa gobollada Soomaaliyeed ee xorta ah.
Waxaa iyana xiiso ku kordhiyey dhaqdhaqaaqii ardeyda, labadii kooxood ee ka soo laabtey Kuuriyada Waqooyi oo ay u soo dhamaatey tababarka ciidan. Raggaas oo tiradoodu ay 100 nin dhaafsiisneyd, dowladdii kacaanka waxay u soo bandhigtey in ay kamid noqdaan ciidamada Soomaaliyeed. Laakiin dhamaantood waa ay diideen oo waxay hal cod ku sheegeen in ay yihiin naftooda hurayaal u diriraya qadiyadda gobolkooda. Sidaa darteed waxay muujiyeen in ay doonayaan in ay food-saar ciidameed kaga howl-galaan gobolka, kaas oo lagaga kicinayo maamulka qanjir-xanuunka ku haya degaanka iyo dadkiisa.
Qaar kamid ah dhallinyaradii ardeyda ahaa ee horey Xamar ugu sugnaa, iyaga oo aad u xamaasadeysan, ayaa waxay bilaabeen in ay qoraallo sameeyaan oo ay ku firdhiyaan magaalooyinka. Waraaqahaas oo ay ku daadiyeen Xamar iyo Kismaayo ayaa taladooda waxay ahayd mid eeyan dhallinyaradu u dhameyn. Hase ahaatee waxaa markiiba ururiyey ciidamadii nabad-sugidda. Dabadeed waxaa la hakiyey dhamaan howlihii ay ardeydu bilaabeen. Qaar ardeydii kamid ah xabsiyada ayaa loo taxaabey, isla markaas dowladdu waxay soo xereysatay dhamaan wixii qoraalo ahaa oo diiwaanka ardeyda ku jirey. Taasina waxay ahayd tilmaan ay dowladdu ku muujineysey sida ay uga go’an tahay in ay dooneyso in halganku uusan gacantooda ka bixin. (Waxaan ka soo xiganay Jeneraal Cabdiraxmaan Caabi, Qaahira, 10/4- 2004).
Xilliga uu dhaqdhaqaaqaasi ka socdo magaalo-madaxdii Soomaaliya, waxaa xabsiga ku jirey hoggaamiyihii jabhadda soomaaligalbeed Maxamad Diiriye Uurdoox. Isaga waxaa la xirey bishii abriil 1974-kii. Sababtuna waxay ahayd is-diid aragtiyeed ee dhex tiil isaga iyo hoggaamiyihii Kacaanka Jeneraal Maxamad Siyaad. Uurdoox wuxuu arkayey, muddada lagu jiro hayaanka, in jabhaddu ay ahaato mid u madax-bannaan talooyinkeeda iyo howl-galladeeda. Waxa ay Soomaalida isugu yimaadaana in ay ahaato taageero walaal curad ah uu siiyo yaraankiis. Maamulkii Kacaanka ayaa isagu arkayey in jabhaddu ay ahaato mid 100 % hoos timaada rijiimka, isla markaas, gobolka in uusan ahayn mid ka duwan gobollada uu kacaanku ka taliyo. Khilaafkaasina wuxuu bilowdey maamulkii Kacaanka oo aanan 60 maalmood dalka heyn. Markaas oo Jeneraal Maxamad Siyaad uu ku casumey xafiiskiisii Maxamad Diiriye. Doodii ugu horeysey oo dhex-martey ayuu midba midka kale u sheegey aragtidiisii. Markii ay adkaatey in leysu tanaasulo, ayaa waxaa dhacdey in ay is-dhaafsadaan hadallo adag. Sidaas bey labada nin ku kala fogaadeen. (Waxaan ka soo xiganay Maxamad Diiriye Uurdoox, Nairoobi, 28/7- 2004).
Waxaa jirey nin ay dhallinyaradu u direen gudaha soomaali-galbeed sanadkii 1974-kii. Howshaasi waxay ka danbeysey markii xabsiga loo taxaabey guddoomiyihii ururka Maxamad Diiriye Uurdoox. Ninkaa la direy waxaa magaciisa la yiraahdaa Cumar-Nuur Shiikh Khaliif. Wuxuu ahaa macallin wax ka dhiga dugsiyadii sare ee Xamar. Markii dhallinyaradii Xamar lagu xirxirey, Cumar-Nuur iyo saaxiibo uu gobolka ka heley,waxay go’aansadeen in ay bilaabaan howl-gallo ciidan oo ay kula dagaalamayaan ciidamada Itoobiya iyo taakuladooda. Dhaqdhaqaaqa uu Cumar-Nuur bilaabey wuxuu ahaa mid xaddidan, waxaana loo yiqiin Goraya-cawl.
Madaxdii Soomaalida waxaa ay qorsheysteen in ay marka hore culeyska saaraan madax-bannaanida Jabuuti, waayo waxaa fadhiyey gumeysi reer Yurub ah (Faransiis). Waxaa u muuqatey in taasi ay sababeyso in ay gacan kaga helaan dowladaha Afrika iyo caalamka Carabta intaba. Dhanka Itoobiya, Soomaalidu waxaa ay is tuseen in ay isha kala socdaan xaaladda burburka ah oo ay dowladda Itoobiya ku socoto, isla markaasna ay ka bilaabaan howlo ay ku urursanayaan ogaallada ciidammada Itoobiya.
Jabuuti waxay kamid tahay gobollada ay Soomaalidu degaan oo ay ku hawoonayeen in ay helaan maamulkeeda. Qeybsigii Barliin iyo maamulladii gimeysiga ee ka danbeeyey, dhaawacyada ay gaarsiiyeen gobolka Jabuuti, waa ay noqon waayeen kuwo daah saara xaqa ay Soomaalidu u leeyihiin aaya ka-taliska gobolka. Ururkii Leegada oo ahaa urur-siyaasadeed kii ugu horeeyey oo ay beelaha Soomaaliyeed ku midoobaan, baaqoodii ugu horeeyey waxaa kamid ahaa midnimo iyo madax-bannaani Soomaali-weyn. Sanadkii 1959-kii, Maxamuud Xarbi oo odey ka ahaa urur ka jirey Jabuuti oo ay ganacsatada iyo wax-garadku lahaayeen, ayaa Xamar yimid. Ujeeddada booqashadu waxay ahayd in uu ka qeyb galo marti-qaad uu xisbigii Gareedka u fidiyey dhallinyaro matalayay gobollada Soomaaliyeed ee shanta ah. Fadhigaas oo lagu magacaabay Pan Somali Congress, raggii ka hadley ayuu kamid ahaa Maxamuud Xarbi. Hadalladiisii waxaa kamid ahaa :
” ……. Madax-bannaanidan soo dhowaatey ee laba gobol oo Soomaali ah ay ku naaloon doonaan, waxay iigu muuqataa mid aanan calfaneyn. Waanse ku faraxsanahay, waayo bulsho ballaaran ee Soomaaliyeed iyo caruurtooda ayaa hoos harsanaya. Waan rumeysnahay, gobollada ku harey gacanta gumeysigana in ay maalinteeda iska kicin doonaan oo ay gacmaha qabsan doonaan walaalahooda Soomaaliyeed. .. ………. . Waxaan maqlayaa shanta Soomaaliyeed. Waxaan idiin sheegayaa in gobollada Soomaaliya aanay ahayn shan. Marka lagu daro jasiiradda Suqadara, gobollada aanu leenahay ee shisheeyuhu qeybsadeen waa lix ……… “. (Waxaanu ka soo xiganey danjire Cabdullaahi Xasan Maxamuud oo maalintaa goob-jooge ahaa).
Gobanimo daryeel baan lahaa dawladnimo taage
Dadkii dhaxal la’aa baan lahaa dooga haw hadho’e
Dakharada bogsii baan lahaa doogta kugu taalle
(Maxamad Ibraahim Hadraawi).
Inkasta oo Jabuuti ay tahay dalka Afrika ugu yar oo baaxaddiisu ay le’eg tahay 23.000 km square, misana miisaan culus ayuu ku lahaa qadiyadda ay isku heysteen Soomaaliya iyo Itoobiya. Xuduudda ay Jabuuti la leedahay Itoobiya waxay shan jeer ka weyn tahay midda ay Soomaaliya la leedahay (349 km : 58 km). Soomaalidu waxay arkayeen in Jabuuti ay tahay dhul kamid ah gobolladeeda, halka ay Itoobiya arkeysey in gobolku uu yahay halbowlihii nolosheeda.
Faransiisku wuxuu ku dadaaley in gobolka uu ku magacaabo Dhulka Cafarta iyo Ciisaha, isaga oo daba taagan aragtida gumeysiga ee filka weyn ee ah qeybi oo xukun. Laakiin waxaa ka hor yimid diidmo caalami ah. Gobolka waxaa loo yiqiin magaca ah Xeebta Soomaaliyeed (La Cote des Somalis). Faransiiska wuxuu mar walba dadka Cafarta ah ku abuurayey colaad ay u qaadaan Soomaalida. Wuxuu Jabuuti ka dhisey laba urur siyaasadeed oo kala matalaya labada reerood oo ku nool degaanka oo kala ah Soomaalida iyo Cafarta. Waxaa kale oo jirey urur gobanimo-doon ahaa oo dibadda ka dhisnaa, kaas oo taakuleyn ka haystay Soomaaliya. Ururadaasi waxay kala ahaayeen sidan :
1.Union et Progres dans L´Ensemple Francais UPEF : Waa xisbiga ay lahaayeen dadka Cafarta. Waxaa ay gacan saar la lahaayeen maamulkii Faransiiska. Doorasho la qaadey sannadkii 1974-kii, dhamaan fadhiyadii barlamaanka waxaa ku guuleystey xubnihii xisbigan.
2. Ligue Populaire Africaine pour L´ Independence LPAI : Waa xisbi gobannimo-doon ah. Waxaa ku bahoobey Soomaalidii ku nooleyd degaanka, haba u badnaadaane beesha Ciise. Saldhigga xisbiga wuxuu ku yiil Jabuuti, wuxuuna ahaa xisbi qunyar socod ah.
3. Fronte de Libe´ration la Coste des Somalia FLCS : Wuxuu ahaa urur hubeysan oo u dagaalamayey madax-bannaanida Jabuuti. Madaxda ururkan waxay fadhiyeen Xamar oo ahayd meesha laga asaasey.
Kacaankii Soomaaliyeed, culeys ayuu saarey maamulkii Faransiiska ee ka dhisnaa Jabuuti. Meelaha uu ka cadaadiyay waxay isugu jireen mid diblomaasiyadeed, mid siyaasadeed iyo mid ciidameed. Ujeeddadu waxay ahayd in Jabuuti ay hesho madax-bannaani, dabadeedna ay la midowdo Soomaaliya. Dowladaha Carabta ah ee Faransiisku uu la leeyahay xiriirka gaarka ah (Marooko, Aljeeriya iyo Tuunis) ayaa Soomaalida gacan ku siiyey sidii Faransiiska loo qancin lahaa. Waxaa kale oo Faransiiska culeys ku hayay falalka kordhayay oo xubno naftooda hurayaal ah ay kula dirirayeen maamulkii Jabuuti. Dhacdooyinkaa waxaa ugu cuslaa fal, xubno kamid ah jabhaddu, ay ku af-duubeen danjirihii Faransiiska u fadhiyey magaalada Xamar. Waxaa kale oo jirey fal kale oo ay Jabuuti kaga af-duubeen bas ay saaraayeen ardey u socotay dugsiyo, kuwaas oo ay dhaleen shaqaale Faransiis ah.
Arimahaasi waxay ka danbeeyeen doorashadii Jabuuti ka dhacdey sannadkii 1974-kii,oo ay si xoog leh ugu guuleysteen xisbigii Cafarta ee la oran jirey Union et Progres dans L´Ensemle Francais. Xisbigaas oo uu hoggaamiye ka ahaa nin la yiraahdo Cali Burhaan Caarif ayaa ku guuleystay fadhiyadii oo idil. Xilligaas, xisbiga matalayey dadka Soomaalida ah ee Jabuuti ku nool LPAI, waxaa hoggaaminayey Xasan Guuleed Abtidoon. Cali Caarif wuxuu ahaa nin ku dhashay Jabuuti, aabihiis oo ganacsade ahaa ayaa wuxuu ka yimid dalka Turkiya.
Isha Tixraaca Dr S Enow